Doorashada Sweden iyo tartanka xisbiyada | Somaliska
Ayadoo ay 6 isbuuc oo keliya ka dhiman tahay doorashada baarlamaanka Sweden ayaa xulufada Xisbiyada talada haya ay u muuqdaan kuwo hogaanka u haya ololaha doorashada. Afarta xisbi ee kala ah moderatka, xisbiga dhexe, liberalka iyo kuwa lagu magacaabo Christian democratka oo ah xulufada talada wadanka haysa ayaa ololaha ku hogaaminaya 49%. Xulufada mucaaradka oo ka kooban xisbiyada Soshalka, Xisbiga bidixda iyo Xisbga cagaaran ayaa ka daba dhow oo hada haysta 46%. Xisbiga fog ee lagu magacaabo Sweden democrats ayaa hada haysta 4% ayadoo laga yaabo in ay kursi ka helaan baarlamaanka. Xisbiga Soshalka ayaa u muuqda mid aan si fiican u soo kaban ayadoo dadka ay filayeen in uu sidaan ka wanaagsanaado. "Waxay u muuqataa in ay ka liitaan sidii 2006, ayadoo sanadkaas loo arkay masiibo ku habsatay xisbiga Socialka. Heerka ay hada joogaan waa mid aad u hooseeya, ayadoo xitaa aysan ahayn xisbiga ugu wayn wadanka oo ay horey u ahaayeen" Ayuu yiri Toivo Sjörén oo ah madaxa cod bixinta hay'ada Sifo. Balse wargeyska Svenska Dagbladet ayaa ka digay tirada cododka ay soo bandhigtay Sifo ayadoo laga yaabo in 6 isbuuc ee dhiman ay wax badan isku badalaan. Xigasho: The Local
Ayadoo ay 6 isbuuc oo keliya ka dhiman tahay doorashada baarlamaanka Sweden ayaa xulufada Xisbiyada talada haya ay u muuqdaan kuwo hogaanka u haya ololaha doorashada.
Afarta xisbi ee kala ah moderatka, xisbiga dhexe, liberalka iyo kuwa lagu magacaabo Christian democratka oo ah xulufada talada wadanka haysa ayaa ololaha ku hogaaminaya 49%.
Xulufada mucaaradka oo ka kooban xisbiyada Soshalka, Xisbiga bidixda iyo Xisbga cagaaran ayaa ka daba dhow oo hada haysta 46%.
Xisbiga fog ee lagu magacaabo Sweden democrats ayaa hada haysta 4% ayadoo laga yaabo in ay kursi ka helaan baarlamaanka.
Xisbiga Soshalka ayaa u muuqda mid aan si fiican u soo kaban ayadoo dadka ay filayeen in uu sidaan ka wanaagsanaado.
“Waxay u muuqataa in ay ka liitaan sidii 2006, ayadoo sanadkaas loo arkay masiibo ku habsatay xisbiga Socialka. Heerka ay hada joogaan waa mid aad u hooseeya, ayadoo xitaa aysan ahayn xisbiga ugu wayn wadanka oo ay horey u ahaayeen” Ayuu yiri Toivo Sjörén oo ah madaxa cod bixinta hay’ada Sifo.
Balse wargeyska Svenska Dagbladet ayaa ka digay tirada cododka ay soo bandhigtay Sifo ayadoo laga yaabo in 6 isbuuc ee dhiman ay wax badan isku badalaan.
Ciid Wanaagsan. Ciid Mubarak